Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya oo u ambabaxay Kenya (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Jen. C/qaadir Sheekh Cali Diini iyo wafdi uu hoggaminayo ayaa maanta u ambabaxay dalka Kenya.
Wasiir Diini ayaa dalka Kenya uga qayb gali doono shir looga hadlayo amniga, waxana wasiirka kusoo sagootiyay garoonka Aaden Cadde saraakiil ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya.
Wuxuu sheegaya wasiirki inuu dalka Kenya uu kulamo kula yeelan doono saraakiil sare oo dhanka ammaanka ka taagero Soomaaliya, kuwaas oo ay ka wada xaajoon doonaan dar-dargelinta arrimaha Amniga iyo xoojinta taageerada ay dhinaca amniga ay ka siiyaan milateriga Soomaaliya.